ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့မောင်ဥက္ကာ | ဥက္ကာကိုကို
ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့မောင်ဥက္ကာ	Posted by oakkarkoko on February 27, 2011
Posted in: ပြောချင်တာပြောမယ်.	Tagged: ပြောမယ်.	4 Comments
ပြောကိုမပြောချင်ဘူး။ ပြောတော့ပြောရမယ်။ ခုတလော ဆဲဆိုခြင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွန်ပလိန်းတွေအဆက်မပြတ်တက်လာကြတယ်။ ကွန်ပလိန်းဆိုတာကတော့ ကွန်ဒုံးမသုံးတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
စပြောရမယ် ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မောင်ဥက္ကာစောက်ရမ်းမိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာကစရမယ်။ မောင်ဥက္ကာ ဘာကြောင့်ဆဲသလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ဆဲချင်လို့ကိုဆဲတာ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူပေါင်းစုံရှိတယ်။
လူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလောက်မမိုက်ရိုင်းသင့်ဘူး။ မှန်တယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်ဘူးလား။ မြန်မာတစ်ယောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ရိုင်းစိုင်းရသလား။ မှန်တယ်။ အဲလိုပြောတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြောမယ်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ခင်ဗျားတို့ထက်ပိုနားလည်တယ်။ ဘာသာရေးကို ခင်ဗျားတို့ထက်ပို ကိုင်းရှိုင်းတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ခင်ဗျားတို့ထက် ဆယ်ဆကျွမ်းကျင်တယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာကောအပြင်လောကမှာရော မောင်ဥက္ကာရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လက်ညိုးထိုးမလွဲဘူး။ ခင်ဗျားတို့ထက်ပိုပြီး လူချစ်လူခင်ပေါတယ်။ ရန်သူမရှိဘူး။ မိတ်ဆွေပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ဆက်ဆံနေတာ။ မောင်ဥက္ကာဆဲတတ်တာအဲဒီလူတွေအားလုံးသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူနဲ့မှ ပြဿနာမဖြစ်ဘူး။ အားလုံးနားလည်တယ်။
ပြောမယ်။ မောင်ဥက္ကာ နေရင်းထိုင်ရင်းဆဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ အပြင်မှာဆို တစ်ခွန်းဆဲဖို့အရေး တစ်ပတ်လောက်အားယူရတယ်။ ဆဲခံရတဲ့လူတွေက အဆဲခံရအောင်လုပ်တာကိုး။ ချုပ်ပြောရရင်ဆဲသင့်တဲ့လူကိုရွေးဆဲတာ။ မဆဲသင့်တဲ့လူကို မဆဲဘူး။
ဂျီတော့ခ်မှာရှိတယ်။ တချို့လာအက်ကြတယ်။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လက်ခံပြီးသားပဲ။ အဲဗားရက်စ် ပဲ။ ကိုယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အကောင့်တက်လာရင် မေးမယ်။ ဘယ်သူပါလဲခင်ဗျာ။ ဘယ်ကပါလဲ။ အဲဒီလို။ အဲဒါကိုပြန်ဖြေကြတယ်။ စောက်တလွဲ။ လူပါတဲ့။ လီးပဲပေါ့။ ခွေးမဟုတ်မှန်းတော့သိသားပဲ။ ခွေးတွေအင်တာနက်သုံးတယ်လို့မကြားဖူးဘူး။ လူမှန်းသိသားပဲ။ ဘယ်ကလဲဆိုတော့ အိမ်ကပါတဲ့။ သူတောင်းစားတွေအင်တာနက်မသုံးဘူး။ သိသားပဲ။ စောက်တလွဲတွေလာပြောကြတာ။ မှန်မှန်ပြောပါ။ မညာပါနဲ့။ အွန်လိုင်းမှာ လိမ်ညာလှည့်ဖျားတဲ့ခေတ်မရှိတော့ဘူး။ အရင်ကဆို ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်းကို လှီးလွှဲပြောကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းဒါတွေမရတော့ဘူး။ အသုံးမ၀င်တော့ဘူး။ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ လူ့ဘောင်ကိုချီတက်နေတယ်။ အလိမ်အညာတွေနဲ့ စကားလာပြောရင်တော့ လီးဘဲလို့စဆဲပြီးသားပဲ။
အချိန်တွေပိုနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီခေတ်မှာ ဘယ်သူမှအားယားမနေဘူး။ အလုပ်မရှိရင် အိမ်သာထဲဝင်ပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ကလိနေကြ။ ရှင်းရှင်းပဲပြောတယ်။
နောက်တစ်ခုပြောမယ်။ မောင်ဥက္ကာအွန်လိုင်းကို ရုံးမှာသုံးတယ်။ ဂျီတော့ခ်ဖွင့်ထားတယ်။ စက်နားမှာမရှိဘူး။ စက်နားမှာမရှိဘူးလို့စာရေးထားတယ်။ စောက်မျက်လုံးတွေကမမြင်ကြဘူး။ ကတောင်…ကတောင်နဲ့ လာလာပြောကြတယ်။ တစ်ခါတလေစက်မှာ မောင်ဥက္ကာမရှိဘဲ တခြားလူတွေသုံးနေတာ။ ရုံးစက်ဆိုတော့ ၀န်ထမ်းပေါင်းစုံသုံးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လက်ပတော့ဝယ်ပြီးမှ ပြေလည်သွားတာ။
နည်းနည်းပါးပါးနားမလည်ပေးကြဘူး။ စက်နားမှာမရှိလို့ စကားပြန်မပြောဖြစ်တာကို စိတ်ဆိုးချင်ကြတယ်။ အဲဒီတော့လည်း လီးဘဲပေါ့။ ဒါပဲရှိတာ။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုထုတ်ကြွားတာမဟုတ်ဘူး။ ထုတ်ကြွားရအောင်လည်းနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ 10-စီစီ ထိုးထားတာမဟုတ်ဘူး။ ရှင်းမယ်ထင်တယ်နော်။
ထပ်ပြောဦးမယ်။ မောင်ဥက္ကာအကောင့်မှာ လူပေါင်း 800 ကျော်ရှိနေတယ်။ အွန်လိုင်းအမြဲသုံးတာ 100 ကျော်မယ်။ ခဏတဖြုတ်ဝင်လာကြတာ 200 လောက်ရှိမယ်။ ကျန်တာက တစ်ပတ်နေမှတစ်ခါလောက်ပေါ်လာကြတာ။ အပေါင်းအသင်းများတယ်။ ပြီးတော့ ပြောခဲ့ပြီးသလို လူတိုင်းကိုလက်ခံတယ်။ မောင်ဥက္ကာကမေ့တတ်တဲ့ရောဂါလည်းရှိတယ်။ အဲဒါကလိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားစူးမေ့တတ်တာ။မောင်ဥက္ကာသူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ စုံစမ်းကြည့်။ အားလုံးနားလည်တယ်။ ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားကို နောက်နေ့မေ့တတ်တာအမြဲပဲ။ အဲဒါက ပေါ့ပေါ့နေ၊ ပေါ့ပေါ့စားလို့ပြောချင်ပြောနိုင်တယ်။ ဘာကိုမှစိတ်ထဲအရမ်းကြီးထည့်မထားတတ်ဘူး။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်လည်း သိပ်အလေးမထားဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဒုက္ခမပေးတာ။ ကြာလာတော့ လွယ်လွယ်မေ့တတ်တဲ့စောက်ကျင့်က ပါသွားရော။ နားလည်ပေးကြပါ။ တောင်းပန်တယ်။
တစ်ရက်ကလည်း ရုံးကဘော်ဒါတစ်ယောက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ သတင်းထောက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လာအက်လို့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ အဆင်ပြေပြေပါပဲ။ ညနေကျတော့မောင်ဥက္ကာအွန်လိုင်းပြန်တက်တော့ သူ့ကိုတွေ့တယ်။ မမှတ်မိဘူး။ ဘယ်သူလဲမေးတော့ မနက်ကပဲပြောပြီးပြီလေတဲ့။ မေ့တာ။ ပြန်ပြောပါလား။ စောက်ပါးစပ်တွေက အနေကြသလား။ ဒါလေးပြန်ပြောရမှာကိုဘာဖြစ်သွားမှာမို့တုန်း။ အဲဒါနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဆဲမိလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်။ ဘလော့သွားရော။ ရမုပါလုပ်လိုက်တယ်ဆိုပဲ။ လုပ်ပေါ့။ ဇယားရှုပ်တာတောင်သက်သာသေးတယ်။ ရုံးကသူငယ်ချင်းလေးကတော့ မကျေနပ်ဘူးပေါ့။ သူ့ကိုဟိုကပြန်တိုင်တာကိုး။ မောင်ဥက္ကာကိုလာကြိမ်းတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်သူတို့ပါသိက္ခာကျရတဲ့သဘောမျိုးပြောလာတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာကိုးရို့ကားယားလာလုပ်ရင်တော့ မိန်းကလေးလည်း ဆဲဖို့ဝန်မလေးဘူး။ ဘယ်သူ့သိက္ခာမှလည်းစောက်ဂရုမစိုက်ဘူး။ တော်တော်သိက္ခာရှိပြနေကြတာ။ဟဟ။ ကိုယ့်သိက္ခာကိုတောင် ကိုယ်အလေးထားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ကိုယ့်လောက်လူချစ်လူခင်ပေါတာလည်း ကိုယ်ပဲရှိတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတယ်။ ပြောစရာရှိတာဘွင်းဘွင်းပြောတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်လိမ်ညာရင်ဆဲတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုထိပါးလာကိုသည်းမခံဘူး။ တတ်နိုင်သရွေ့တော့ မောင်ဥက္ကာဆိုတဲ့ကောင်ကစိတ်ဆိုးတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုဘလိုင်းကြီးဆဲနေတာကိုတောင် ပြုံးပြုံးလေးခံယူတတ်တာ။ ဘာဖြစ်လဲ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အားလုံးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပေါ့။ အမှတ်အတေးလည်းမထားဘူး။အညိုးအတေးဆိုတာလည်း မထားတတ်ဘူး။ အမြဲသည်းခံမှုနဲ့နေလာတဲ့ကောင်။ ပလီပလာနဲ့လာတော့မညာနဲ့။ မထင်ရင်မထင်သလိုဆဲမှာဘဲ။ အဲဒီတော့မှ စိတ်မဆိုးနဲ့။
ကိုယ်လည်းမညာဘူး။ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်သူလဲ။ဘယ်ကလဲမေးရင် အမှန်အတိုင်းဖြေတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်။ ကျုစရာရှိတာကျုတယ်။ ဆဲစရာရှိတာဆဲတယ်။ ဆွေးနွေးစရာရှိတာဆွေးနွေးတယ်။
ခေတ်လူငယ်တွေပဲ။ ပွင့်လင်းကြပါ။ အမှန်တရားကို ရင်ထဲမှာထည့်ထားကြပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လိမ်ညာနေတာ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းသလဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ညာဖြီးရင်းနဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးစောက်ကျင့်ပါကုန်မယ်။ မြန်မာတွေလူလိမ်လူညာတွေဖြစ်ကုန်မယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဘောင်ကို ချီတက်ကြမယ်။ ဒါပါပဲ ။ ။
← ခွေးရုပ်ရှင် (ခေတ်သစ်ရုပ်ပြသရော်စာ)	မမေ့သင့်တဲ့မွေးနေ့နဲ့ နှစ်ပတ်လည်များ →	4 comments on “ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့မောင်ဥက္ကာ”
ကံမသား on May 24, 2013 at 10:32 am said:
gtalk လိပ်စာပေးခဲ့ပါလားအဘ kaungkinlay99က
Green on October 26, 2011 at 9:51 am said:
ဥက္ကာ တော်တော် ဟတ်ထိနေတုန်းကထင်တယ်
oakkarkoko on February 27, 2011 at 10:38 am said:
ကျော်ညိုသွေး on February 27, 2011 at 10:19 am said:
မောင်ဥက္ကာနေရင်းထိုင်ရင်း ဆဲတာ မဟုတ်ဘူး။ သွားရင်းလာရင်း ဆဲတာ(ဟိဟိ)
အပြင်မှာဆို တစ်ခွန်းဆဲဖို့အရေး တစ်ပတ်လောက်အားယူရတယ်။
(ဟုတ်တယ်လေ… အဆဲခံရတဲ့ လူတွေက
“ဘာ..၀ိုးမသား ” လို့ တိုင်ပေးမှ တော့ မောင်ဥက္ကာက “ငါဝိုးမသား ” ဆိုပြီး လိုက်အော်တာပေါ့ ခွိခွိ)